လေ့ကျင့်ခန်းကိုနှစ်သက်ရန်သင်စီစဉ်ထားပါသလား။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
ဧပြီလ 9, 2014, 12: 01 နံနက်
ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအချို့ကို run ဖို့မမွေးဖွားဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သောပါပဲ။ ဓာတ်ခွဲခန်းကြွက်များ၏မျက်စိ-ဖွင့်အသစ်ကမျိုးရိုးဗီဇလေ့လာမှုအရ, ဇီဝကမ္မဗေဒ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ, လေ့ကျင့်ခန်းဖို့လှုံ့ဆျောမှု - သို့မဟုတ်မ - ကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအမွေဆက်ခံနိုင်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်းအဘို့, သိပ္ပံပညာရှင်များကျွန်တော်တို့ဟာသင့်ကိုငါတို့သိကြ၏သည့်အခါဒါမှလူအနည်းငယ်မှန်မှန်လေ့ကျင့်ခန်းအဘယ်ကြောင့်များမေးခွန်းက bedeviled ပါပြီ။ ဆင်းရဲသောသူသည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကုိုကြည့်အချိန်ဇယားအပါအဝင်သိသာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သုတေသီတွေကတချို့မကြာသေးမီစမ်းသပ်ချက်အကြံပြုအဖြစ်မျိုးရိုးဗီဇလည်းတစ်ကဏ္ဍမှပါစေခြင်းငှါ, မှနျးမှစတင်ပါပြီ။ တဦးတည်းအတွက်, ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေ, ခွာခြင်းနှင့်တူညီအရွယ်ရောက်အမွှာ၏အစုံ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံဖို့လှုပ်ရှားမှုမော်နီတာဝတ်ဆင်။ အဆိုပါရလဒ်များအမွှာရှင်းပြမယ်လို့တစ်ဦးတည်းတစ် shared ကြီးပြင်းခြင်းထက်မိမိတို့၏စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအလေ့အထများပိုမိုရောနှောခဲ့ကြကြောင်းညွှန်ပြ။ အထဲကအလုပ်မလုပ်သို့မဟုတ်တနေ့လုံးထိုင်ဖို့သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မျိုးရိုးဗီဇအပေါ်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းအတာအထိမှီခို, သုတေသီကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ဒါပေမယ့်အရာမျိုးဗီဇပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါနှင့်မည်သို့သူတို့အားမျိုးဗီဇ၏လှုပ်ရှားမှုအတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းမှထွက်ကစားစေခြင်းငှါ, နက်နဲသောအရာရှိသတည်း။ ဒါကြောင့်မစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များသည်မကြာသေးမီကတိရိစ္ဆာန်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် avid- ကိုသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်းများကသူတို့အားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့ delve ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
သူတို့ကဆန္ဒအလျောက်အဆိုပါဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာဘီးပေါ်မှာ run ခဲ့ကွောငျးအချင်းချင်းမွေးမြူသာမန်ကြွက်ဖွငျ့ဤတာဝန်ပြည့်စုံ။ အများဆုံးကိုလည်းအများဆုံး run ဖူးသောအမျိုးသမီးကြွက်များနှင့်အတူရပ်ကြီးခဲ့သည်ကို run သောအထီးကြွက်; အနည်းဆုံး run ဖူးသောသူတို့သညျလညျး mated ခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များမှာအားလုံးလျှင်အခြားသူများကိုသာတိုတိုတုတ်တုတ်သူတို့အပေါ်မှာ skitter မယ်လို့စဉ်လိုလိုလားလား, ဘီးအပြေးအပေါ်နာရီပေါင်းများစွာမယ်လို့အချို့သောကြွက်နှစ်ခုကွဲပြားအုပ်စုများခဲ့ချိန်အထိဒီအ scheme ကိုများစွာသောသားစဉ်မြေးဆက်တဆင့်ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
In ဤအကြွက်များနှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်အဆိုပါသုတေသီများဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအခြို့သောမျိုးဗီဇများလှုပ်ရှားမှုအချို့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သာမန်အခြေအနေများတွင်ဤဗီဇကြီးပြင်းခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ကမ္ဘာကြီး join ဖို့ငယ်ရွယ်ဆဲလ်တွေကိုပြောပြကြောင်းပရိုတိန်းဖန်တီးပါ။ အဆိုပါမျိုးဗီဇပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုမပြုခဲ့လျှင်မူကား, အဆိုပါဆဲလ်လိုအပ်သောဓါတုဗေဒမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိပြီးအချိန်ကြာမြင့်စွာ, feckless ဆယ်လူလာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၌မတည်ပါဘူး။ ထိုသို့သောနုဆဲလ်အာရုံကြောကွန်ယက်ကို join လို့မရဘူးကျန်းမာဦးနှောက် function ကိုအထောက်အကူပြုပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့်အဲဒီမျိုးဗီဇကို run ဖို့ရပ်ကြီးအတွက်ကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက်သာမန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စကားရပ်ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်သော, အနျူကလိယ accumbens ဟုခေါ်တွင်အထူးသဖြင့်ဦးနှောက်၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းအတွက်, non-ပြေးသမား '' ဦးနှောက်ထဲမှာအတော်လေးကွဲပြားခြားနားခဲ့သည်။ လူသားများနှင့်များစွာသောတိရစ္ဆာန်များမှာနျူကလိယကျွန်ုပ်တို့ပျော်မွေ့ခြင်းနှင့်ထုတ်ရှာသောလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံလာသောအခါတက်ထွန်း accumbens ။
သိပ္ပံပညာရှင်နီးကပ်စွာကြွက်များ၏နှစ်မျိုး၏ဦးနှောက်ကိုလေ့လာသည့်အခါယူဆရရလဒ်အဖြစ်, သူတို့မအုပျစုခဲ့ရင်တောင်ငယ်ရွယ်လူကြီးအားဖြင့် run ဖို့ရပ်ကြီးတိရစ္ဆာန် non-အပြေးသမားကိုပြု၏ထက်နျူကလိယ accumbus ပိုမိုရင့်ကျက်အာရုံခံခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ တကယ်တော့အများကြီးပြေးပြုသောအမှု။ လက်တွေ့ကျတဲ့စည်းကမ်းချက်များ၌, ထိုတွေ့ရှိချက်ကတော့ပြေးလိုင်းမှမွေးဖွားခွေးများ၏ဦးနှောက်ပင်အကြိုးအပြေးကိုရှာဖွေရစေတယ်ဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြဟန်မယ်လို့; ဦးနှောက်၏အကျိုးကိုစင်တာသူအပေါငျးတို့ရင့်ကျက်အာရုံခံလေ့ကျင့်ခန်းမှတုန့်ပြန်စေ့စ့စပ်စပ်ပစ်ခတ်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ပြောင်းပြန်ဟာတွန့်ဆုတ်-ပြေး line ကနေကြွက်, ရင့်ကျက်အာရုံခံသူတို့ရဲ့ skimpier အဖြည့်နှင့်အတူ, ယူဆရရွှေ့ဖို့အားနည်းပင်လှုံ့ဆျောမှုရှိလိမ့်မယ်။
သူများသည်ရလဒ်များကိုလည်းဘီးနှင့်အတူအချို့သောမွေးဖွား-to-run တိရိစ္ဆာန်များပေးနေစဉ်သိပ္ပံပညာရှင်များတွန့်ဆုတ်ပြေးသမား, ဘီးအပြေးမှာသူတို့ကို setting များကလေ့ကျင့်ခန်းခဲ့သောစမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံးသောအဘို့ကိုအတွက် မှလွဲ. စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ခြောက်ရက်ပတ်လုံးပြီးနောက်, ဆန္ဒအပြေးသမားနီးပါး 3.5 ကီလိုမီတာနိူးခြင်းဖြင့်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, ကြွက်နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. 34 ကီလိုမီတာ (နှစ်ခုမိုင်) ဝေးလျော့နည်းမိုင်အကွာအဝေးစုဆောင်းခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် halfhearted ပြေးသမား '' ဦးနှောက်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။ အထိုင်များကနျြရစျခဲ့သောထိုသူတို့၏မိသားစုလိုင်းအတွက်အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယခုသူတို့ကသူတို့နျူကလိယ accumbens ပိုမိုရင့်ကျက်အာရုံခံပြသခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းသဘာဝကျကျ avid ကြွက်ပြေးသမားအကြားထက်လျော့နည်းကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးပြီးကျန်ရစ်ပေမယ့်သူတို့ကပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ဖွယ်ထင်ရလိမ့်မယ်လို့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျင့်သုံးတုံ့ပြန်ခဲ့ကြသည်။
ဘာမှမပါလျှင်, ထိုတွေ့ရှိချက်များကိုလူတို့အဘို့အဘယ်သို့ဆိုလိုဖြစ်ပါတယ် "ဒီအမှတ်မှာသိရန်မဖြစ်နိုင်," ဖရန့် Booth, လေ့လာမှုကြီးကြပ်သူကိုမစ်ဆူရီတက္ကသိုလ်မှဇီဝဆေးဝါးသိပ္ပံပါမောက္ခကပြောကြားခဲ့သည်။ ကြွက်ဦးနှောက်ဟာလူ့ဦးနှောက်ကိုမဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ကြွက်တွန်းအားမှာအကောင်းဆုံးဒီလိုပါပဲဖြစ်ကြသည်။
ဒါတောင်မှဒေါက်တာ Booth ကပြောပါတယ်, သူ့အုပ်စုတစ်စုရဲ့ data နဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ကိုကျော် "လူသားတွေဟာအိပ်ရာပေါ်ထိုင်ဖို့လှုံ့ဆျောမှုများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အခြားမျိုးဗီဇမှလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ဗီဇရှိစေခြင်းငှါ" အဲဒီမျိုးဗီဇ၏တဦးတည်း set ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်စတင်နိုင်တယ်လို့အကြံပြုယ့်ပုံပဲ တစ်မိသားစုအတွင်း။ ဒါပေမယ့်ဓာတ်အာဏာရှင်ဘယ်တော့မှဖြစ်ကြသည်။
"လူတွေကလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်" လို့ဘာပဲသူတို့၏အမွေဥစ္စာ, ဒေါက်တာ Booth ကသူ၏လေ့လာမှုရဲ့နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအကြံပြုအဖြစ်ရွေ့လျားတဲ့အပျော်အပါးဖြစ်လာနိုင်အောင်, သူတို့ဦးနှောက် rewire နိုင်ကလည်း, ။